Himalaya Dainik » छद्म पोर्न : एक युवती युवकको हात समाउदै सरासर कोठाभित्र पस्छिन् जव कोठामा पुग्छन् अनि…
छद्म पोर्न : एक युवती युवकको हात समाउदै सरासर कोठाभित्र पस्छिन् जव कोठामा पुग्छन् अनि…
१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार
एक पोर्न भिडियो सुरु हुन्छ । एकजना युवती युवकको हात समाउदै सरासर कोठाभित्र पस्छिन् । जव कोठामा पुग्छन् । ती दुईबीच कामुक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । यस्तै क्रिया अगाडि बढिरहँदा दर्शकले आनन्द त उठाउँछन् । तर, त्यसमा प्रयोग भएको एक प्रविधिको मेलोमेसो भने कमैले मात्र पाउँछन् ।
इमा वाट्सन, केटी पियरी, टेलर स्विफ्ट, स्कार्लेट जोहान्सनजस्ता चर्चित सेलेब्रिटीका पोर्न भिडियो इन्टरनेटमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । तर, ती वास्तविक होइनन्, डिपफेक प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिएका हुन् ।
इन्टरनेटमा अचेल भेटिने अधिकांश पोर्न भिडियो सक्कली हुन्छन् । तर, तिनमा प्रयोग भएका अनुहार भने सक्कली नहुन सक्छन् । कसैको शरीरमा अरू नै कसैको अनुहार ल्याई जोड्ने र यस्ता भ्रामक भिडियो बनाउने यस प्रविधिलाई ‘डिपफेक’ नाम दिइएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अन्तर्गत पर्ने जेनरेटिभ एडभर्सियल नेटवर्क (जीएएन) प्रविधि प्रयोग गरी यस्ता भिडियो उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१७ मा अमेरिकी विमर्श वेबसाइट रेडिटमा स्टार वार्सकी एक अभिनेत्री डेजी रिड्लेको नक्कली पोर्न भिडियो सार्वजनिक भएपछि डिपफेकमाथि मानिसको रुचि बढ्न थालेको हो । त्यसको केही समयपछि वन्डर वुमनकी अभिनेत्री ग्याल गदोट र उनका भाइबीच यौन क्रियाकलाप देखाइएको एक भिडियोले त इन्टरनेटमा एक प्रकारको तहल्का नै मच्चायो ।
‘क्याप्टेन अमेरिका’, ‘लस्ट इन ट्रान्सलेसन’ जस्ता चलचित्रबाट ख्याति कमाएकी स्कार्लेट जोहान्सन यस विषयमा खुलेर बोल्नेमध्येमा पर्छिन् । सुरुमा आफूलाई त्यस्ता भिडियोले मानसिक रूपमा असर पारे पनि विस्तारै त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिन छोडेको अभिव्यक्ति उनले दिएकी थिइन् । तर, सबैले यी वास्तविक हुन् भन्ने नबुझिदिनाले कतिमा भने यसले समस्या पनि पैदा गर्न सक्ने उनको ठम्याइ छ ।
सन् २०१८ को जनवरीमा ‘फेक एप’ नामको डेस्कटप एप्लिकेसन आयो । एक व्यक्तिको अनुहार अर्काको शरीरमा जोडी छद्म भिडियो निर्माण गर्न यसले धेरै हदसम्म सहज बनायो । एआईको टेन्सरफ्लो नामक फ्रेमवर्कमा निहित रही कार्य गर्ने यस एप्लिकेसनले प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको अनुभूति त गरायो, तर यसको प्रयोगको सिकार भएका व्यक्तिलाई भने चरित्र हत्याको प्रत्याभूति गरायो ।
रंगकर्मीमात्र होइन, राजनीतिज्ञ पनि डिपफेकको सिकार बनेका छन् । जर्मनीकी शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ एन्जेला मेर्केलदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कहिल्यै नदिएका भाषण उनीहरूको अनुहार प्रयोग गरी बनाइएका छन् । केलाई आधिकारिक र केलाई छद्म मान्ने भनी यसले चिन्ता पैदा गरेको छ ।
डिपफेक प्रयोग गरी बनाइएका भिडियोहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेका हुनाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले त्यसमाथि अंकुश लगाउन त्यस्ता भिडियो हटाउने र ती पोस्ट गर्ने अकाउन्टलाई समेत ब्लक गर्ने जनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो पोर्नोग्राफी वेबसाइट पोर्नहबले यस्ता भिडियो हटाउने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाइरहे पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा गर्न नसकेको आरोप छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुने कसैको फोटोको चरम दुरुपयोग गरी बनाइने यस्ता भिडियो प्राय: महिलामाथि केन्द्रित हुन्छन् । सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म विवरणको ख्याल राखी बनाइने यस्ता भिडियो वास्तविक होइनन् भनी किटान गर्न जोकोहीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । यो रिपोर्ट कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
कोरोना अस्पतालका डाक्टरको पीडा: घरबेटीले घर नआऊ भने, होटेलमा बसेको छु
कोरोनाका एक जना पनि बिरामी छैनन्- उत्तर कोरिया
साप्ताहिक राशीफल: चैत्र २० गते बिहिबारदेखि २६ गते बुधबारसम्म
मलेसिया सरकारले भन्यो- ‘लकडाउनमा महिलाहरु मेकअप गर्नुस्, चिटिक्क पर्नुस्’
कोरोनाको महामा’री: नेपाल सरकारलाई २ करोड सहयोग गर्ने पूर्वराजाको घोषणा
फिल्म गर्न मुम्बईबाट आएकी अदिती घरमै बन्द
नाजिर र नम्रताको प्रेम चर्चा
मंगलबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ?
कोरोनाको डरले वडासचिवले नर्सलाई घरबाट निकाले
लकडाउनमा महाकाली नदीमा पौडेर नेपाल आएका तीन जना पक्राउ
कोरोना आशंकामा आइसीयूमा रहेका युवाको मृ’त्यु
विदेशबाट आएकाको घरमा गाउँपालिकाले रातो झण्डा राख्दिने
बुटवल घटना: श्रीमानको मृत्यु तर समवेदना दिने कोही छैनन्
कोरोना शंकास्पद बिरामी मृत्यु: स्वाब संकलनमै ‘लापर्बाही’, खुलेन कारण
कस्तो बिडम्बना ! पैसा नभएपछि लाश जलाउन पनि नपाइने